About us - hannari-shop
Selokhu sasungula inkampani yethu e2013, besithengisa izikhwama ezisetshenzisiwe ezifana neChANEL, LOUIS VUITTON, njalonjalo.
Singabathengisi abangabanikazi besibili abanamalayisense yiKhomishini Yezokuphepha Komphakathi YaseJapan.
Uhulumeni waseJapan ufuna bonke abathengisi bezandla zesibili babe nale layisensi ukuvimbela inkohliso. Uma othile eJapan ethengisa ngaphandle kokuthatha ilayisense, kuba yicala.
Umgomo wethu webhizinisi ukwenza ikhasimende lethu lijabule.
Sithengise izinkulungwane zezikhwama eziyiqiniso zeChANEL eminyakeni eyisithupha edlule.
Amakhasimende amaningi athola izikhwama ezinhle kithi ngokushesha nangokuphepha.
Ingabe ukhathazekile ngomnikazi othile othinte izikhwama ezisetshenzisiwe? Ngubani olethe izikhwama lapho? Ngeke siwubambe lolo lwazi ngoba sithenga izikhwama emakethe yabathengisi. Kepha akudingeki uzenze ungakhathazeki ngoba uthenga kithi. Sifaka amagciwane futhi sizidlele zonke izikhwama ngokusebenzisa i-generator ye-ozone efanelekile nephephile isikhashana ukuze sikwenze ukhululeke futhi uthokomele lapho wamukela.
Uma ungathanda, sicela ubheke eyethu ikhasi lezimpendulo kusuka kwikhasimende.
Uma unemibuzo, sicela ukhululeke cela us